Su'aalaha Badanaa La isweydiiyo ee ku saabsan Caawinta Kirada ee Arimaha degdega RentHelpMN COVID-19
Hoos waxaa ku yaalo su'aalaha badanaa la isweydiiyo (iyo jawaabaha) la xiriiro Caawinta Kirada Xaaladaha degdega COVID-19 ee Faderaal ahaan loo Maalgeliyo. Kuwaan waxaa loo cusbooneysiin karaa si mudeysan si ay uga jawaabto su'aalaha dheeraadka ah, si ay u bixiso xaqiijinada ama saxitaanada, iyo si loogu daro warbixin dheeraad ah sida hagid cusub waxaa laga bixiyay Waaxda Dhaqaale hayaha Mareykanka.
Q. Yaa u qalma Caawinta Kirada Xaalada degdega HelpMN COVID-19?
Kireystayaasha buuxiyay dhammaan sharuuda xigta way u qalmi kartaa barnaamijkaan:
Qoyska wuu kireysanayaa.
Qoyska waa inuu lahaadaa diyaarin oo ay ka kireysanayaan milkiilaha guriga. Tani waa inay ahaataa deegaankaaga koowaad ee Minnesota. Heshiiska kirada hadeer ama heshiiska kirada oo ay saxiixeen labadaba kireystaha iyo milkiilaha waa qaabka dokumintiga ay doorbideen. Haddii heshiiska kirada aan la bixin karin, dokuminti kale waa la ogolaan karaa sida biilka korontada, cadeynta ka imaaneyso milkiilaha ama wakiilka maareynta, ama jeegaga la joojiyay ama bayaanada u muujinayo lacag bixinada milkiilaha.
Qoyska wuxuu la kulmay dhibaatada COVID-19.
Hal xubin ama xubno badan oo qoyska ah waxay muujin karaan sida cudurka safmarka COVID-19 si toos ah ama aan tooska aheyn ugu saameeyay awoodooda lagu bixinayo kirada ama qarashaadka. Tani waxaa ku jiri karo u qalmida faa'idooyinka shaqo la'aanta, ee la kulmayo yareynta daqliga qoyska, iyo/ama qarashaadka weyn ee la galayo ama lala kulmayo dhibaatada dhaqaalaha sabab la xiriirto cudurka safmarka (toos ah ama aan toos aheyn).
Qoyska wuxuu buuxiyaa u qalmida daqliga.
Daqliga qoyska laga yaabo inuusan gaarin boqolkiiba 80% ee Aaga Daqliga Dhexaadka (AMI) oo aaga qoyska ku yaalo sida lagu go'aansaday Waaxda Guriyeynta iyo Hormarinta Magaalada (HUD) iyo gobolka codsadaha daganyahay. Dukumintiyada waa loo baahanayaa inta lagu jiro nidaamka codsiga. Hoosta boggaan u dag si aad u aragtid xadeynada daqliga oo gobol ahaan.
Qoyska wuu ka dib dhacay kirada.
Wajiga 1 ee barnaamijka, qoyska waa inuu ka dib dhacaa kirada si ay ugu qalmaan codsashada. RentHelpMN waxay rabaan inay hubiyaan in dhammaan kireystayaashaa ay ka fakarayaan kirada waqtigeeda la soo dhaafay ka hor u furitaanka barnaamijka codsadayaasha ee u baahan caawinta kirada mustaqbalka.
Q. Waa maxay tallaabooyinka lagu codsanayo?
Ku qaado waqtigaaga codsadaha. Barnaamijka wuxuu leeyahay lacago badan oo ma jiraan wax degdeg ah. Sida badan ee codsigaaga u dhameystiranyahay, sida fudud ee kooxdeena dib u eegayaan.
TALLAABADA 1. Ku bilaabida codsigaaga onleenka ka hor, dib u eeg dhammaan sharuudaha u qalmida iyo liiska dokumintiyada loo baahanyahay. Usu keen dhammaan dokumintiyada muhiimka ah oo diyaar hakuu ahaadeen, midkood sida koobiyada la sawiray ama cad, sawirada u qalmida ee la xareynayo.
TALLAABADA 2. Dhameystir su'aalaha sawirka hore ee Barnaamijka Caawinta Kirada Xaaladaha degdega ah COVID-19 (renthelpmn.org).
TALLAABADA 3. Haddii aad heshid fariin tilmaameyso in laga yaabo inaad u qalantid, ku bilow codsiga adiga oo buuxinayo magacaaga, ciwaanka i-meelka, lambarka taleefonka iyo baaswuudhka (oo xaqiiji baaswuudhkaaga). Hubi inaad ku keydisid baaswuudhkaaga meel badqab ah.
TALLAABADA 4. Dhameystir codsiga, oo ay ku jiraan xareynta dhammaan dukumintiga muhiimka ah, oo riix “Gudbi.”
TALLAABADA 5. Waad fiirin kartaa heerka codsigaaga xili walba Barnaamijka Caawinta Kirada Xaalada degdega ah COVID-19 (renthelpmn.org). Waxaad u baahaneysaa magaca isticmaalaha iyo baaswuudhka.
TALLAABADA 6. Codsigaaga iyo dukumintiyada dib ayaa loo eegayaa, iyo milkiilahaaga iyo bixiyayaasha qarashaadka waa lala xiriirayaa. Waa lagula soo xirirayaa haddii warbixin dheeraad ah loo baahdo.
Q. Miyaan weydiistaa 3 bilood oo kirada mustaqbalka?
Haa, haddii aad qorsheysid inaad sii wadid inaad ku noolaatid gurigaaga oo aad rabtid in caawin horay u socoto. Barnaamijkaan wuxuu bixiyaa daganaanta guriga oo labada ah daboolida qarashaadka la soo dhaafay ee guriga oo daboolayo kiradaada imaaneyso sadex bilood waqtigiiba. Markii buuxineysid codsigaaga, haddii aad filaneysid inaad ku jirtid gurigaaga aad kireystay sadexda bilood ee xigta, weydii illaa cadadka kirada buuxdo oo aad masuulka ka tahay inaad horay u socotid. Tani waxaa lagu heli karaa labadaba Wajiga 1 iyo Wajiga 2.
Q. Milkiilaheyga guriga ayaa ii bilaabay codsiga aniga. Maxay midaan la micna tahay? [la cusbooneysiiyay 4.26.21]
Milkiilayaasha waxay gudbin karaan warbixinta xiriirka oo kireystayaashooda, taas oo abuurto koonto laakin uma aasaasto codsi buuxo caawinta. Kireystaha wuxuu u baahanyahay inuu raaco ciwaanka la siiyay oo lagu daro daqliga, warbixinta kirada iyo cadeymaha looga baahanyahay in lagu gudbiyo codsi. Haddii kireystaha raaco linkiga oo dhameystirayo iyo gudbiyo codsi dib ayaa loo eegayaa iyo, haddii ay u qalmaan oo la ansixiyo lacag bixinta, horaan ayaa loogu xiray koontada milkiilaha. Si kastaba, milkiilayaasha maku gudbin karaan iqtiyaarkooda. Haddii kireystaha uusan qaadin wax tallaabo ah, diiwaangelinta milkiilaha aasaasay way dhaceysaa oo waxaa la joojinayaa 10 maalmood kadib.
Q. Yaa loogu daray sida xubin qoyska ah?
Xubnaha qoyska waxaa ku jiro kuwa xiggo:
Dhammaan dadka weyn ee ku nool qeybta waqtiga codsiga
Dhammaan carruurta ku nool qeybta oo waqtiga codsashada
Carruurta aan dhalan ee dumarka uurka ah (oo codsiga onleenka, u geli taariiqda codsiga sida dhalashada canuga)
Q. Haddii aan helo caawin, ma inaan dib u celiyaa?
Maya. Caawintaan ma ahan deyn oo looma baahno inuu dib u celiyo kireystaha haddii lacagaha loo isticmaalo sida la ansixiyay. Milkiilayaasha waxay ku soo celin karaan lacagaha haddii kireystaha uusan markale daganeyn qeybta. Kireystayaasha masuul kama ahan waajibaadyada milkiilahooda.
Q. Haddii aan helo caawin miyay faa'idooyinkeyga kale sida kaarka cuntada iyo caawinta guriyeynta saameyneysaa?
Maya. Haddii aad heshid caawintaan ma saameyneyso u qalmidaada oo barnaamij walboo faderaal ahaan loo maalgeliyay sida kaararka cuntada, Medicaid, Medicare, amniga bulshada, WIC ama guriyeynta bulshada. Haddii milkiilahaaga uusan si toos ah lacag bixin kaaga qaadi karin, waxaa laga yaabaa inaan si toos ah kuu siino lacagaha. Lacagahaas looma tixgleinayo daqli oo ujeedooyinka canshuurta faderaalka oo ma saameyneyso u qalmidaada barnaamijyada faderaal ahaan loo maalgeliyay. Illaaladaan waxay ku dhisantahay sharciga bixiyay caawintaan. Haddii aad heshid faa'ido oo aan faderaal ahaan loo maalgelin, fadlan la hubi maamulka faa'idada.
Q. Haddii uusan i gaarin COVID-19, miyaan weli codsan karaa?
Haa. Cudurka safmarka way ku adkeyd inta badan dadka oo si ah. Haddii aad la kulantay waqti adag oo buuxinta qarashaadka iyo bixinta kiradaada, waad u qalmid kartaa.
Q. Sidee ayaan ku garanayaa haddii daqligeyga u qalma? Illahee daqliga ah ayaan ku daraa markii aan go'aansanayo daqliga qoyska?
Codsiga, waxaad ku dareysaa daqliga ka imaanayo dhammaan illaha loogu tallogalay xubnaha qoyska da'da 18 sanno jirka ah iyo ka weyn oo ka qeyb ah qoyska. Tani waxaa ku jiro mushaarada, magdhowga shaqo la'aanta, daqliga dhaqaalaha, tallooyinka, daqliga ganacsiga, daqliga iskaa u shaqeysiga, shaqo ka fariisiga, howlgabka, faa'idooyinka Amniga Bulshada, iyo daqliga Amniga Bulshada Dheeraadka. Fadlan hoosta boggaan u dag si aad u fiirisid xadeynada daqliga oo gobol ahaan. Miiskaan waxaa sidoo kale loo heli karaa ka dajisashada bogga Illaha.
Q. Raadintee intarneetka ayaan u baahanayaa inaan u isticmaalo codsiga?
Codsigaan wuxuu si wanaagsan ugu shaqeeyaa Google Chrome. Haddii aadan laheyn nooca ugu dambeeyo, waxaad ka dajin kartaa Google Chrome.
Q. Miyaan codsan karaa haddii aan ku noolahay guriyeynta dadweynaha, ama leeyahay Qeybta 8 ama Foojarka Iqtiyaarka Guriyeynta, ama caawinta guriyeynta?
Haa. Waad codsan kartaa cadadka kirada lagaaga baahanyahay inaad bixisid haddiiba qarashaadkaas aanan lala bixin caawinta kale oo aad buuxisid dhammaan sharuudaha u qalmida kale.
Q. Miyaan codsan karaa haddii kiradeyda aysan dhaafin waqtiga?
Wajiga 2, waad codsan kartaa haddii kiradaada aysan dhaafin waqtigeeda. Booqo renthelpmn.org si aad u hubisid wajiga barnaamijka uu ku jiro. RentHelpMN waxay bixisaa qarashaadka waqtigooda dhaafay iyo caawinta kirada oo kirada mustaqbalka haddii aad buuxisid dhammaan sharuudaha u qalmida barnaamijka.
Q. Miyaan u baahannahay inaan wadaago heerka muwaadinnimadeyda ama daganaanshaha?
Guriyeynta Minnesota waxay soo dhaweyneysaa dhammaan kireystayaasha buuxiyo sharuuda kore si u codsadaan caawinta kirada. Codsiga uma baahno heerka socdaalka ama dokumintiga muwaadinnimada. Wixii caawin, soo wac 211.
Q. Noocyadee kirada guryaha ayaa u qalma caawinta?
Noocyada xiggo ee dhismooyinka kirada deegaanka ayaa u qalma RentHelpMN:
Guryaha qoyska-kaliga ah
Guryaha loo sameeyay kirada
Qeybaha guryaha la sameeyay
Hoteelka ama albeergada waxay ahaaneysaa sida deegaanka koowaad ee kireystaha
Diyaarinada heshiiska kirada kale ee aan rasmiga aheyn, maadada dib loogu eegayo barnaamijka
Q. Qarashaadkee ayaa lagu daboolayaa?
RentHelpMN waxay siineysaa caawin kirada deegaanka oo aan ka badneyn 12 bilood, iyo kordhin suurtogal ah oo sadex bilood ah sida ku saleysan baahida. RentHelpMN ayaa dabooleyso qarashaadka waqtigooda la dhaafay oo ay ku jiraan korontada, gaaska, adeegyada tamarta guriga, biyaha, siiwajka iyo qashin bixinta. Barnaamijka ma daboolo adeegyada taleefonka iyo intarneetka.
Q. Miyay RentHelpMN dabooleysaa qarashka adeega intarneetka?
Maya. Waqtigaan, RentHelpMN ma daboosho qarashka adeega intarneetka. Booqo FCC ama warbixinta ku saabsan Faa'idada Fiilada intarneetka Xaalada degdega. Waxaan ku cusbooneysiineynaa linkiyada illaha kale sida laga heli karo renthelpmn.org.
Q. Ka waran haddii aan qabay kiro ka hor Abriil 1, 2020?
RentHelpMN ma bixin karto caawinta qarashaadka taariiqda ka horeysay Maarso 13, 2020. Kirada waqtiga dhaaftay Abriil 2020 waa bisha u qalmida ugu horeyso ee caawinta kireystayaasha ee heshiiska kirada bil-laha.
Q. Miyaan codsan karaa RentHelpMN haddii aan la wadaago qol?
Haa. Qof walba ee ku nool qeybta waxaa loo tixgeliyaa inay ka qeybyihiin qoyska oo waa inay wada codsadaan, illaamaa ay ka haystaan diyaarinta dokuminti cad ee kirada guriga ka qeyb ah oo gooni ahaan. Dhammaan dadka weyn waa ijnay bixiyaan dokumintiga daqliga.
Q. Waxaan codsaday Barnaamijka Caawinta Guriyeynta COVID-19 (CHAP) oo horaan ayaa u bixiyay warbixintaan. Maxaan ugu baahannahay inaan dib u codsado?
Nasiib daro, kuwaan waa labo barnaamijyo kala gooni ah oo leh sharuudo kala duwan. Tani waxay la micna tahay waa inaan weydiinaa su'aalo kala duwan oo qiimeynaa xaaladaada hadeer. Waan ka raali gelineynaa ku haboonaan la'aan walba.
Q. Ka waran haddii aanan la heyn helitaanka sawiraha, koobiyeeyaha ama mashiinka fakiska si markaas aan u gudbiyo dokumintiga loo baahanyahay?
Waad gudbin kartaa dokumintiyada adiga oo isticmaalayo mobeelka casriga ah oo sawiro ka qaadayo dokumintiga oo aan ku xareynayo sawirka nidaamka codsiga. Dhammaan warbixinta sawirka waa inay cadaataa oo si fudud loo aqrin karo. Qaar ka mid ah goobaha xafiiska saadka waxay bixin karaan adeegyada bogaadinta iyo sawirida ee gargaarka la xiriiro COVID. Ogeysii shaqaalaha ama maareeyaha inaad codsaneysid barnaamijka gobolka caawiyo oo weydii haddii goobtooda ay bixiyaan fakiska bogaadinta iyo adeegyada sawirista. Waxaad sidoo kale ku codsan kartaa codsiga warqada oo ay ku jiraan foomamka la buuxin karo iyo bashqada boostada soo celiso. Haddii aad u baahantahay caawin dheeraad ah, soo wac 211.
Q. Maxaan sameeyaa haddii aan ogaado inaan qalad ku sameeyay arjigeyga gudbinta kadib?
Codsiyada waxaa dib u eego koox tababaran, oo firfircoon. Qaladaad badan oo cad sida xareynta lama filaanka ah ee dokumintiyada qaldan ama gelinta ebar dheeraad ah ee codsiga kiradaada waa la qabanayaa oo kooxda ayaa kula soo xiriireyso. Wixii qaladaad ah sida qorista ciwaanka i-meelkaaga ama gudbinta ka hor intaadan dhameysan, ka soo wac 211 wixii warbixin ku saabsan sida loogu sheego qaladaadka codsigaaga.
Q. Sidee ayaan ku ogaanayaa heerka codsigeyga?
Waxaad geli kartaa bogga codsiga si aad u aragtid heerka nidaamka codsigaaga uu marayo oo waqti walba ah. Waxaad sidoo kale soo waceysaa 211 si aad kala hadashid qof heerkaaga.
Q. Miyay jiraan cadad ugu badan oo inta caawin la ogolyahay?
Maya, guud ahaan ma jiraan daboolid cadadka doolarka caawinta kirada ama qarashaadka. Si kastaba, waxaa jiro xadeyn tirada guud ee bil-aha caawinta la heli karo. Barnaamijka wuxuu bixin karaa 12 bilood caawin ah, iyo kordhin sadex bilood suurtogal ah, oo guud ahaan 15 bilood caawin ah. Xadeynada dheeraadka ah ayaa lagu soo rogi karaa waxay ku xirantahay helitaanka illaha.
Q. Miyaan codsan karaa wax ka badan hal bil caawin ah?
Haa. Codsadaha loo ansixiyay wuxuu u qalmi karaa ugu badnaan labo iyo toban bilood caawin ah, iyo kordhin sadex bilood suurtogal ah, oo guud ahaan 15 bilood. Tani sidoo kale waxay quseysaa qarashaadka. Waxaa laguugu dhiirogelinayaa inaad codsatid sadex bilood mustaqbalka ah ee daboolida kirada markii aad codsatid kirada la soo dhaafay haddii aad filaneysid inaad ku noolaatid qeybtaas mustaqbalka. Waxaad u baahan kartaa inaad bixisid warbixin dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo inaad weli u qalantid caawinta iyo caawinta ay ku xirantahay illaha la heli karo.
Q. Ima aysan dhaafin kirada. Miyaan codsan karaa qarashaadka kaliya?
Haa, Wajiga 2 ee RentHelpMN. Waxaad u baahaneysaa inaad buuxisid dhammaan sharuuda u qalmida. Ka fiiri renthelpmn.org si aad u aragtid wajigee uu ku jiraa barnaamijka.
Q. Waxaan ahay milkiile guri. Miyaan codsan karaa qarashaadka iyo caawinta intarneetka?
Nasiib daro, maya, lacagaha RentHelpMN waxaa loo heli karaa kaliya kireystayaasha. Illaha kale ee la heli karo waxay ku qoranyihiin renthelpmn.org, oo ay ku jiraan caawinta tamarta iyo kabida fiilada intarneetka. Milkiilayaasha guriga ee raadinayo caawinta amaahda guriga waxaa lagu dhiirogelinayaa inay iska diiwaangeliyaan aqbaaraha ka imaanayo Guriyeynta Minnesota ee ku saabsan lacagaha caawin walboo imaaneyso.
Q. Haddii kireyste laga saaro iyo/ama laga guuriyo qeybta, miyay ugu qalmaan caawin lagu bixinayo kirada oo aagaga qeybta hore ee barnaamijkaan?
Maya. Kireystaha waa inuu weli ku noolyahay qeybta oo ay u codsanayaan caawinta. Waan fahamsannahay inay jiraan dano lagu balaarinayo caawinta barnaamijka ee lagu daboolayo aagaga la xiriiro qeybaha hore; waa inaan dib u qiimeynaa haddii hagid faderaal dheeraad lagu soo daayo arintaan.
Q. Kiradeyda waxaa lagaarayaa kowda bisha. Miyaa caawin loo siinayaa milkiilaheyga sidaas degdega ah? Illaa intee ayay qaadaneysaa in la helo ansixin iyo lacag bixin?
Markii codsiga la go'aansado inuu u qalmo, caawinta kirada waxaa si toos ah loo siinayaa milkiilaha ama milkiilaha guriga oo ay dhaaftay kirada sida ugu dhaqsiga badan ee suurtogalka ah. Sabab la xiriirto qiyamka la filanayo ee sareeyo ee codsiyada, waqtigaan la joogo ma damaanad qaadi karno jadwalka waqtiga oo dib u eegida codsiga iyo ka baaran daga. Codsadayaasha helaan ogeysiin oo codsi aan dhamesytirneyn waa inay bixiyaan dhammaan warbixinta muhiimka ah ee horay loogu dhaqaajiyo codsigooda. Maalgelinta looma dhigayo codsiyada aan dhameytsirneyn. Fadlan joogtey inaad la xiriirtid milkiilahaaga adiga oo codsiga sugayo.
Q. Miyay caawinta RentHelpMN dabooli kartaa qidmooyinka daahitaanka?
Haa. Qidmooyinka xiliga dambe ee macquulka ah waa la dabooli karaa oo waa in lagu qoraa bayaanka kirada ama buuga milkiilahaaga.
Q. Milkiilaheyga wuu diidayaa inuu la shaqeeyo oo iska diiwaangeliyo barnaamijka. Sida kireyste, miyaan awoodaa inaad codsado caawinta RentHelpMN oo aan helo lacagaha?
Haa! Waan kugu dhiirogelineynaa inaad gudbisid codsi oo soo wacdid 211 haddii aad caawin u baahato.
Q. Sidee ayaa lacag bixinta loo qeybiyaa?
Lacag bixinada waxaa si toos ah loogu sameynayaa milkiilaha guriga, milkiilaha guriga ama shirkada qarashaadka oo matalaada kireystaha oo dhinaca dabaajiga tooska ama jeega. Haddii milkiilaha uusan ogolaaneyn lacag bixinta ama uusan ka jawaabeyn, lacag bixinta waa la siin karaa kireystaha si markaas kireystaha u siiyo lacag bixinta kirada milkiilaha.
Q. Maxaan u baahannayaa si aan u bixiyo caawinta qarashaadka dheeraadka ah?
Waxaad u baahaneysaa inaad bixisid koobiga biilasha qarashaadkaaga waqtigooda la dhaafay ee sheegeyso taariiqaha la daboolay.
Q. waxaan qabaa qidmada xayawaanka, qidmooyinka baakinka garaashka iyo qidmooyinka keydinta. Miyay RentHelpMN u suurtogaleysaa daboolida kuwaas?
Haa, caawinta waxay dabooleysaa qidmooyinka sida tooska ah ugu xiran daganaanta gurigaaga oo lagu dalaco milkiilaha.
Q. Haddii aan ahay guri la'aan, miyaan heli karaa caawin?
Wajiga 2, RentHelpMN waxaa u suurtogeli karto inay bixiso sadex bilood oo kirada soo socooto haddii shaqsiga guri la'aanta ah uu galo heshiis kiro cusub. Maareeyaha dacwada ayaa u suurtogaleyso inuu ku caawiyo. Fadlan ka soo wac 211 oo caawin ah.
Q. Miyay joogitaanada hoteelka muddada gaaban ama albeergada u qalmaan?
Qoysaska dagan hoteelka ama albeergada way cadeyn karaan inay bixinayaan kiro qolka oo ay u baahanyihiin caawin. Ma dabooli karno kirada muddada gaaban ama qarashaadka hoyga ee ku daboolan lacagaha xaaladaha degdega, sida caawinta FEMA.
Q. Waxaan ahay milkiile guri. Maxaanan si toos ah ugu codsan karin? Miyaan u baahannahay in kireystayaasheyda ka qeybqaataan?
Sida waafaqsan sharciyada faderaalka, kireystayaasha waxaa looga baahanyahay inay bixiyaan warbixinta gaarka ah ee ku saabsan nafsadooda iyo barnaamijka waa inuu illaaliyaa xogtaas. Kireystaha waa inuu sidoo kale saxiixaa codsiga si u codsado caawin. Milkiilayaasha guriga ayaa ku taageeri karo kireystayaasha ku caawinta usu keenista qoraalada ay ugu baahanyihiin inay ku codsadaan, iyagoo bixinayo warqada codsiga, oo kala xiriirayo kireystayaasha wax ku saabsan xaalkooda.
Q. Waxaan ahay milkiile guri. Kireystaheyga wuu ka dib dhacay kirada oo waxaan rabaa inay iyaga codsadaan laakin kama qeybqaadanayaan. Maxaan sameyn karaa?
Waan ognahay in midaan ay noqon karto jahwareer, laakin sharuudaha faderaalka ayaa bixiyay in kireyste saxiixo codsi walba oo caawinta mana jiraan qaab milkiilayaasha ku codsadaan iqtiyaarkooda caawin. Qaar ka mid ah kireystayaasha way ka walaacsanyihiin inay u baahanayaan inay dib u celiyaan caawinta ama aysan ku caawineyn inay guriga ku nagaadaan. Waad ku caawin kartaa inaad u sheegtid kireystahaaga inaysan u baahaneyn inay dib u celiyaan caawintaan iyo haddii kiradooda gadaal la xaliyo ay sii wadan karaan inay guryahooda daganaadaan.
Q. Yaa ku bixinayo caawin dhinaca RentHelpMN?
Dowlada faderaalka waxay bixisay qoondeynada Caawinta Kirada Xaaladaha degdega oo labadaba maamulada gobolka iyo deegaanka. Gobolka qoondeynta Minnesota ee Caawinta Kirada Xaaladaha degdega waxaa bixiyay Guriyeynta Minnesota, taas oo ah wakaalada koowaad ee ka baarandageyso codsiyada ee dhinaca RentHelpMN. Wakaaladaha dowlada deegaanka, oo ay ku jiraan caasimadaha Minneapolis iyo Gobolka Saint Paul iyo Dakota, Gobolka Hennepin, Gobolka Ramsey, iyo Gobolka Washington sidoo kale waxay heleen qoondeyno toos ah ee Caawinta Kirada Xaaladaha degdega oo faderaalka ah. Waqtiyada qaar wakaaladaha dowlada deegaanka waxay sidoo kale aqbali karaan codsiyada oo illaa nidaamka RentHelpMN oo ka baarandagayo codsiyadaas sida waafaqsan xeerarkooda gaarka ah iyo nidaamyada.
Q. Waa maxay xadeynta daqliga oo qoyskeyga ugu qalmayo?
Daqliga qoyska ma dhaafi karo boqolkiiba 80% ee Aaga Daqliga Dhexaadka (AMI) ee aaga ee qoyska ku yaalo. Fadlan dib u eeg jadwalka hoose si aad u heshid gobolkaaga iyo cabirka qoyska si loo arko waxa xadeynta daqliga ee aagaaga tahay.
Xadeynada daqliga ee RentHelpMN oo gobol ahaan